အခုရေးမယ့်ဆောင်းပါးလေးကတော့ မနေ့ညက တင်ခဲ့တဲ့ “ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်တွေကို စွန့်လွှတ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီ ” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာ မင်းသမီးတစ်ပါး ကျော့မော့စွာ ရပ်နေတာနဲ့ တူတယ် ။ ကမ္ဘာ့မြေပေါ် မှာ မြန်မာနိုင်ငံလောက်ပထ၀ီအနေအထားအရရော ပုံသဏ္ဍာန်အရရော စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရရော ဘယ်နိုင်ငံမှ မယှဉ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူခဲ့ကြပါတယ် ။ ကချင် ၊ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ မြန်မာ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ၊ ရှမ်း အစရှိသဖြင့် တိုင်းရင်းသားများအပါအ၀င် တခြားမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်ကြတဲ့ ပအို့ဝ် ၊ ပလောင် ၊ လားဟူ စသဖြင့် လူမျိုးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနေလာခဲ့ကြတယ် ။ သမိုင်းမှာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကို အခုတလော ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတွေနဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေထက်မှာ များပြားစွာ တွေ့လာနေရတယ် ။ အမေရိကန်လို နိုင်ငံကြီးတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်မှတ်ယူပြီး ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးကြတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ထည့်သွင်းတော့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပေါ်ပေါက်လာရပြန်တယ် ။
ဒီတော့ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုထဲ ထည့်သွင်းမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကျွန်တော့်ကိုမေးခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော် ပြတ်ပြတ်သားသားပဲဖြေမှာဖြစ်တယ် ။ ဘယ်သာသာကိုပဲကိုးကွယ်နေပါစေ ရိုဟင်ဂျာ ဟာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မျိုးနွယ်စုမဟုတ်တဲ့အတွက် “ လုံးဝလက်မခံပါဘူး ” လို့ ဖြေပါတယ် ။ ရိုဟင်ဂျာ တွေကောင်းသည်မကောင်းသည် ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘာလုပ်နေသည် ကျွန်တော်မသိချင်ပါ။ ယခုကိစ္စသည် အမြင်နှင့်မဆိုင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ တိုင်းရင်းသားတွေ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ခံယူသော အခြေခံ ချစ်ခင်မှု စိတ်ဓါတ်ခံယူမှုနှင့်သာဆိုင်ပါသည် ။
ဒီခေါင်းစဉ်တပ်ရတာ သိပ်တော့မနှိပ်လှပါဘူး ။ ထားတော့ အမှန်ဆို မြန်မာနှင့် အစ္စလာမ် ခရစ်ယာန် ဟိန္ဒူ စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်တပ်ရမယ်မဟုတ်လား ။ ဒါပေမယ့် လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာ ပေါ်လွင်အောင် ရခိုင်နှင့် အစ္စလာမ် ဆိုတဲ့ တဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တပ်လိုက်တယ် ။ စာဖတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ကွန်းမန့်လေးကို ကျွန်တော် အတော်သဘောကျတယ် ။ “ စာရေးတဲ့သူတစ်ယောက် ဟာ ရေးတဲ့စာ ဝေဖန်တဲ့ စာ ထောက်ပြတဲ့စာ ရဲ့အကြောင်း အရင်း သမိုင်းကို သိဖို့လိုတယ် ” ဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ ။ မှန်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီထက် အမြင်တွေချဲ့ကြည့်ရအောင်လား ။ ရခိုင်ဒေသဟာ လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေနဲ့ လှပတဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့ ရခိုင်လူ မျိုးတွေရဲ့ ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ မျက်နှာထားလေးတွေ ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ ရိုင်းပင်ကူညီမှုစိတ်ဓါတ်လေးတွေကြောင့် ကျွန်တော်တိုင်း ရင်းသားတွေအားလုံးကို အရမ်းသဘောကျတယ် ။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စကားပြောရရင် ကျွန်တော်ပျော် တယ် ။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှုတွေ နယ်နမိတ်ထိစပ်မှု ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ တချို့သော Policy တွေကြောင့် မန္တလေးမှာ ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် တရုတ်လူမျိုးတွေကိုပဲမြင်ရသလိုဖြစ်နေရတယ် ။ ထို့အတူ ရခိုင်တွင်လည်း နယ်နိမိတ်ထိစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ တခြားသော အကြောင်းအရာများကြောင့်ဖြစ်စေ ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလာမ်တွေများပြားလာခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိထား မိလာခဲ့တယ် ။
ဒီမေးခွန်းကတော့ ကျွန်တော်ဖြေချင်နေတဲ့မေးခွန်းပါပဲ ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နေရင်းထိုင်ရင်းတော့ တရုတ်နဲ့ အစ္စလာမ်တွေကို မုန်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် နေရာတကာမှာ ကြီးစိုးလာတဲ့ တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ နေရာတကာပျံ့ပွားလာတဲ့အစ္စလာမ်ကိုးကွယ်မှုတွေကြောင့်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေမှာ အရောင်တွေစွန်းထင်းခဲ့တာတော့သေချာတယ် ။ ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အခါ စာရေးသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ သာရေးပြီး personal အတွေးတွေ ခံစားချက်တွေကို ဖယ်ထုတ်ထားလေ့ရှိတယ် ။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲက personal feeling အတိုင်းရေးရရင်တော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်း တစ်ခုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်လူ ။ အဲဒီလိုဆို ကျွန်တော်လည်း စာဆက်ရေးဖို့ အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်သလို ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကို စာဖတ်သူတွေလိုချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကဲ အစ ပြန်ကောက်ကြရအောင် ။ ကျွန်တော် တို့မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ စည်းလုံးညီညွတ်မှု အားနည်းလို့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘုရင်တွေ အား နည်းချက်တွေရှိလို့ သူ့ကျွန်ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ကြရတယ် ။ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဂျပန်တွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အံကိုကြိတ်လို့ ခံခဲ့ကြရတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင် လို့ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ပြန်ယူခဲ့ရတယ် ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မြေပုံစာရွက်ကိုချလို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ရှိတဲ့နေရာတွေကို ကျွန်တော် ခြယ်မှုန်းကြည့်တယ် ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနက်ရောင်ဖုံးလွှမ်းသွားတယ် နေရာတိုင်းမှာ အစ္စလာမ်တွေရှိပါတယ် ။ ကဲဆက်ရအောင်။
အစ္စလာမ် တွေ ဘာလဲ အစ္စလာမ်တွေ ဘယ်လဲ
သိပ်ကောင်းတဲ့အပိုဒ်လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရပြီ ။ အစ္စလာမ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်း သတိထားကြည့်ရင် နေရာတိုင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ် ။ သူတို့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေကနေ (ဘုရားစာ သို့မဟုတ် ဂါထာ တိတိကျကျ ကျွန်တော်မသိပါ ) ရွတ်ဆိုနေတာတွေ ကြားရတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေနဲ့ လူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို မရည်ညွှန်းဘူးဆိုတာ တိတိကျကျ အရင်ပြောပါ့မယ် ။နောက်ဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေက ယုတ်မာရိုင်းစိုင်း တဲ့အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအကြောင်းကို ဆက်ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် ။ တရားဝင်မိန်းမ တစ်ယောက်ထက် ပိုယူခွင့်ပြုပြီး မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးနဲ့ အဓိကအစ္စလာမ်ဘာသာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲတော့ စူးဝင်နေတဲ့ အပ်တစ်ချောင်းလို ကြက်ခြေခတ်တွေ သာဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ “ အစ္စလာမ်တိုင်းဟာ အကြမ်းဖက်တွေမဟုတ်ဘူး -- ဒါပေမယ့်အကြမ်း ဖက်သူတိုင်း ကတော့ အစ္စလာမ် တွေပဲ ” လို့ စာသားလေးတစ်ခု ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ် ။ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးကို အဓိကထားပြီး လူမျိုးပျံ့နှံ့စေပြီး ဘာသာတရားထွန်းကားအောင်လုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ကြောက်စ ရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ။
သိပ်ဝေးဝေးကြည့်နေစရာမလိုပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်တွေအတွင်းမှာလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေခဲ့တယ် ။ ဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ပါစေ အကြမ်းဖက်မှုကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှံ့ချရမယ် ။ မနေ့ကရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးဟာ အကြို အစ တစ်စပဲ သကာရေ လောင်းလို့ ဖွင့်ချထားခြင်းဖြစ်ပြီး အခုဆက်ရေးမှာတွေကတော့နည်းနည်းပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ် ။ အရင်ဆုံးတရုတ်အကြောင်းကြည့်ရအောင်ဗျာ ။ တရုတ်တွေက စီးပွားရေးမှန်သမျှကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး အဓိက နေရာကြီးတွေမှာ တရုတ်တွေသာကြီးစိုးနေခဲ့တယ် ။ မန္တလေးလို စီးပွားရေးမြို့တော်မှာ တရုတ်တွေ ခြေကျင်းလိမ်နေကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် တရုတ်တွေ က ခေါင်းဖြတ် သတ်လို့ သေတယ်ဆိုတာ သိပ်မကြားမိဘူး ။ တရုတ်တွေက မုဒိန်းကျင့် လို့ ခေါင်းဖြတ် သတ်တယ်ဆိုတာ သိပ်မကြားရဘူး ။ တရုတ်တွေလိုချင်တာက စီးပွားရေးအင်အားတောင့် တင်းမှုကိုး ။ သူတို့ဆီမှာတောင်လူဦးရေ့ များလွန်းလို့ လျော့ချဖို့ကြံစည်နေတာဆိုတော့ သူတို့က လူဦးရေ တိုးပွားဖို့ထက် စီးပွား ရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့အပိုင်းမှာပဲ သူတို့ဦးဆောင်နေခဲ့ကြတယ် ။ ဘာသာတရားကိုး ကွယ်မှုအပိုင်း မှာလည်း ထေရ၀ါဒနဲ့မဟာရာန ပဲကွာတဲ့အတွက် သိပ်ပြဿနာမရှီလှဘူး ။ မြန်မာ့သယံဇာတတွေနဲ့စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုတွေကိုပဲ အပစ်ပြောရမယ် ။ အစ္စလာမ်တွေကရော မြန်မာနိုင်ငံကို အသာထားဦး တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြည့်ရအောင် ။ မလေးရှားနဲ့အ င်ဒိုနီးရှားမှာ အကုန်လုံး အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဖြစ် ကုန် တယ် ။ နေရာတကာမှာ အစွန်းရောက် ၀ါဒတွေနဲ့ ဘာသာတရားအုံကြွမှုတွေဖြစ်ကုန်တယ် ။ စစ်သွေးကြတွေ နဲ့ ကမ္ဘာဟာပိုပိုပြီးအကျည်းတန်လာခဲံရတယ် ။
ဘာသာတရားကို နည်းနည်းလောက် အကျယ်ချဲ့ကြည့်ရအောင် ။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အကြောင်း ပထမဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာမို့ပြောတာမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရကိုတော့ အထူးပဲ သဘောကျမိတယ် ။ဘာသာတရား တိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာရှိပါတယ် ။ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာက အဲဒီဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေရဲ့ ပြောင်း လဲလာတဲ့ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ “ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် ” ပါပဲ ။ အစွန်းမရောက်ရဘူး ။ မျှမျှတတ ကျင့်ကြံရမယ်တဲ့ ။
မျှမျှ တတ ဆိုသော ဝေါဟာရ အဓိပ္ပါယ်
မျှမျှတတ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အသွေးနဲ့အသားနဲ့ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားတာပါ ။ မမျှတတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူမှ သည်းခံနေကြမှာမဟုတ်ဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သည်းခံမှုဆိုတာကလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲကောင်းတယ်မဟုတ်ပါလား ။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုကျော်သွားခဲ့ရင်တော့ မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက် တွဲ ပြဿနာတွေဖြစ်လာတတ် တယ်ဆိုတာ အခု လို ကိစ္စက နမူနာ သက်သေဖြစ်သွားခဲ့တယ် ။ “ ဘာကြောင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို စော်ကားယုံတင် အားမရပဲ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ရသလဲ ????” အခု အချိန်ထိလည်း ကျွန်တော် တွေးနေတုန်းပဲ ဒီမေးခွန်းကို ။ သတ်ရလောက်အောင်ရန်ငြိုးရန်စများရှိခဲ့သလား ဒါမှမဟုတ် တခြားဘယ်လို အကြောင်းအရာအမျိုးကများ ဒီလို အဖြစ်ကို ဖြစ်စေ ရလောက်အောင် နာကျည်းမှုတွေရှိခဲ့သလဲ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအဖြစ်ကို ဘယ်လိုတွေးတွေး ကျေနပ်လောက်အောင် အကြောင်းပြချက်မရခဲ့ဘူး ။ ကျွန်တော်က ဒါတောင် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အဝေးဆုံးမှာ နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ။ ဒါဆို ရခိုင်အတွင်းက မိဘ မောင်နှမနဲ့တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်တွေက ဘယ်လောက်တောင် ခံပြင်းနာကျည်းလိုက်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရလောက်ပါတယ် ။ အဲဒီနာကျည်းမှုရဲ့ အကျိုးဆက်က စိတ်မကောင်းစရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Complication နောက် ဆက်တွဲ ပြဿ နာ တွေ ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာ ဒုတိယဖြစ်ရပ်က သက်သေပြလိုက်တယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ မမျှ တလို့ပေါ့ တစ်ခုခုဆို ကြည့်လိုက် အစ္စလာမ်တွေပဲဖြစ်နေတယ် ဒီတော့ အစ္စလာမ်တွေအပေါ်မုန်း တီးမှုတွေများ လာတယ် ။ ခေါင်းတစ်လုံးဖြတ်ရင်ခေါင်းတစ်လုံးပြန်ဖြတ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ကိုဓဥပေထက် နာကျည်း မှုတွေကျော် လွန်သွားတဲ့အခါ ရိုးသားတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် အခုလို ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ရတယ် ။ တကယ့်ကို ရင်ထဲကဆို့နင့်စွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလို ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားတို့နဲ့ထပ်တူ ယုံကြုံးမရဖြစ် ရတယ်ဆိုတာယုံပါ ။
ထပ်ရေးရရင်တော့ စာဖတ်သူတွေ မျက်စိတွေဘာတွေ ၀ါးကုန်လိမ့်မယ် ကျွန်တော် ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်ရ ပါတော့မယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန့်ပွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဂုဏ်ယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ဘာသာတရားပြန့်ပွားအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမလုပ် ဘူး ကျွန်တော်တို့လုပ်တာက ရဟန်းတော်တွေက တရားပြတယ် ကျွန်တော်တို့က အမှားအမှန်ဝေဖန် ပိုင်းခြားလို့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို ရှာဖွေကြတယ် ။ ခရစ်ယာန်တွေက တရားစာ တွေ ဝေတယ် ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေအထိ အခမဲ့ဖြန့်ဝေတယ် သူတို့ ဘာသာတိုးတက်အောင် လုပ်နေကြတာ တကယ့်ကို အားရစရာ ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာသာပြန့်ပွားအောင်လုပ်ဖို့ အများကြီး လိုနေသေးတယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အထူးကောင်းမွန်တဲ့အချက်ကတော့ ကိုးကွယ်သူကိုယ်တိုင်က သက်ဝင် ယုံကြည် လက်ခံပြီး နှစ်နှစ်ကာကာ ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တယ် ။ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်မှုတွေကို ရှောင်ဖယ်လို့ ဘာသာ တရားကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာပြီး ယုံကြည်ဆန်းစစ်ရမယ် ။ ကမ္ဘာမြေမှာ ဗုဒ္ဓရဲ့အနှစ်သာရ တရားတော်တွေသာ နေရာအနှံ့ ပျံ့ပွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အစွန်းရောက် ၀ါဒတွေလည်း ကွယ်ပျောက် သွားမှာဖြစ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေးတရားသံတွေနဲ့ပျံ့လွင့်နေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ယုံကြည် မိတယ် ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ရိုးသားတဲ့ ၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ တကယ့်အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ပြီး ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို လိုလားပြီး မြန်မာပြည်အကျိုးသယ်ပိုးနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကောင်းများကို အားလည်းနာသလို ကျွန်တော် အခင်အမင်လည်းမပျက်ပါဘူး ။ဒါပေမယ့် ဆိုးသွမ်းယုတ်မာပြီး လူမျိုးကို မြိုပြီး ဘာသာတရား ပျံ့ပွားအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုတော့ ဒီစာမျက်နှာကနေ တစ်ခုပြောပြီး သတိပေးလိုက်ပါရစေ ။ “ တခြားနိုင်ငံတွေကို ဘယ်လိုပဲ ၀ါးမြိုပါစေ မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ စိတ်ကူးထဲမှာတောင် မထည့်ထား ပါနဲ့ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လည်း စိတ်မကူးထားပါနဲ့ လက်သည်းဆိတ်ရင် လက်ထိပ်နာဆိုသလို တိုင်းရင်းသားအားလုံး အရေးကြုံရင် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် စည်းလုံညီညွတ်ကြ ပါတယ် ရိုးရိုးသားသားနေထိုင်ပါ ခင်ခင်မင်ပေါင်းကြပါ လူမျိုးကိုမြိုလို့ ငါတို့လူတွေ ချည်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သာရှိနေရင် မြန်မာဆိုတဲ့ သွေးတွေဟာလည်း ဆူပွက်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ” သတိပေးရင်း ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် ။
( လွန်တာရှိ ရင်တောင်းပန်ပါတယ် --- သာမန်စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်စာအရေးအသားမှာ Professional ဆန်စွာ မကျွမ်းကျင်ဘူး ။ ဘာစာအုပ်မှလည်းမထုတ်ဘူးသလို ဘယ်လောက် မှလည်းနာမည် မကြီးပါဘူး ။ ထပ်ရေးချင်တာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် ။ အလုပ်ပိနေလို့ ရတဲ့အချိန်လေး အတွင်းဒီလောက်ပဲရေးနိုင်သေးတယ် ။ အခြေအနေပေးရင် ထပ်ရေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားးပါဦးမယ် ။ )
တကူးတက လာဖတ်ကြတဲ့ စာဖတ်သူအားလုံးလား ရိုသေလေးစား စွာဖြင့်
Posted by သက်တန့်ချို at 11:25 AM
Moe June 8, 2012 at 10:31 PM
I believe you are good man I admire your worries to our country.
But you need to study about Islam and Myanmar Muslimalittle bit more. As You said, you have some Muslim friends.
Please go to the any Mosque as you available and discuss and study about Islam.
Every body and every country don't want to welcome foreign immigrants.
Real basic problem is weak government, corruption and than discrimination to other religions and ethnics groups.
You can see, How Singapore doing for racial harmonies.
I want to read your next article after you study.
တန`င်္လာကိုကို June 9, 2012 at 12:11 AM
မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်တွေက တော့ လူမျိုးဘာသာမရွေး ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်ကြပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြတဲ့ ပုံစံသာကွဲလွဲ သွားမယ် အားလုံကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးနဲ. နိုင်ငံကို ချစ်ကြတယ်။ ခုလည်း ရခိုင်အရေးကိစ္စမှာ ဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာတွေကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းက သတင်းတွေကို ချက်ချင်းသိရပေမယ့် ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘယ်မီဒီယာကမှ မသိဘဲ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ရခိုင်ရွာတွေ အများကြီးပါ။ ခုတက်လာတဲ့ သတင်းတွေကို ကြည့်ရင် ရခိုင်တွေ ဘာကြောင့် မူဆလင် ကုလားတွေကို မုန်းတယ်ဆိုတာ သိလောက်ပါတယ်။
အထက်ပါ link ကို ၀င်ရောက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်း သားမဟုတ်ကြောင်း ၀င်ရောက် လက်မှတ်ထိုးထောက်ခံပေးကြပါ
အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်.ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာထိရင်တော့ (လုံးဝ)မခံချင်တာ အမှန်ပဲ. .အစ္စလာမ်တွေက လူမျိုးကိုမျိုမယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုပဲအကွက်တွေချ ၀ါးမျိုနေပါစေ မရနိုင်ပါဘူး..ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရင်ဆုံး ရှားပါး ပျောက်ဆုံးသွားမဲ့အရာတွေဟာ ကုလား နဲ့ ငါး ဖြစ်ပါတယ်..(ငါးကလည်း တစ်ကောင်ထဲကနေ အများကြီးမွေးလာတယ်..အဲဒီ့နှစ်ခုဟာ အခုအချိန်မှာ အပေါဆုံးဖြစ်နေတယ်..နောင် ရာစုသစ်တွေမှာ အရင်ပျောက်ဆုံးဘို့အတွက် အခု ပေါများနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်)..
ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာထိရင်တော့ (လုံးဝ)မခံချင်တာ အမှန်ပဲ...ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရင်ဆုံး ရှားပါး ပျောက်ဆုံးသွားမဲ့အရာတွေဟာ ကုလား နဲ့ ငါး ဖြစ်ပါတယ်..(ငါးကလည်း တစ်ကောင်ထဲကနေ အများကြီးမွေးလာတယ်..အဲဒီ့နှစ်ခုဟာ အခုအချိန်မှာ အပေါဆုံးဖြစ်နေတယ်..)
အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်.ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုထိရင်(လုံးဝ)မခံနိုင်ပါ.ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကုလား နဲ့ ငါးမျိုးဟာ အရင်ပျောက်ကွယ်မှာဖြစ်တယ်..
Ko Thet tant,
I am always your reader.
And always proud of your posts.
But for this post i really very disappoint you. Because you must READ DETAIL about that religious before you write.
At that time you will know that religious what guide to people.
You should know all problems come from people NOT from religious if you are an educated person.
You must not make fire more & more from your blog.
You said you want peace but this post you made fire.
linnsu June 11, 2012 at 11:01 AM
ေ၇းထားတာအ၇မ်းကောင်းတယ် ဆက်ေ၇းဖို့အားပေးတယ်အကို မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ အ၇မ်းသဘောကျတယ် ကျနော်တို့၇င်ထဲကပြောချင်တာနဲ့ ကွက်တိပဲ အားပေးနေမယ်